Rag Shabaabnimo loo haysto oo lagu qabtay Magaalada Garbahaarey | Dhacdo
Home Wararka Maanta Rag Shabaabnimo loo haysto oo lagu qabtay Magaalada Garbahaarey
Rag Shabaabnimo loo haysto oo lagu qabtay Magaalada Garbahaarey
Ugu yaraan laba nin oo lala xiriiriyay Ururka Al Shabaab ayaa Arbacadii shalay lagu xiray Magaalada Garbahaarey ee Xarunta Gobolka Gedo, ka dib hawlgal ay Ciidamada Dowladda ka sameeyeen magaaladaasi.
Hawlgalkan ayaa yimid, ka dib markii maleeshiyada Al Shabaab ay gelinkii dambe ee Talaadadii tiro hoobiyeyaal ahi ku weerareen magaaladaasi.
War ka soo baxay Al Shabaab ayaa lagu sheegay in madaafiicdaasi lagu weeraray xarun ay wax ku keydsan jirtay Hay’adda WFP.
Cabdi Barre Dhagey, Gudoomiye Kuxigeenka Maamulka Degmada Garbahaarey ayaa sheegay in hawlgalka xubnahaasi lagu soo qabtay uu qayb ka yahay hawlgalo maalmahaanba laga waday wadada xiriirisa Garbahaarey iyo Tuulo Barwaaqo. Tuulo Barwaaqo waxay qiyaastii 18km u jirtaa Magaalada Garbahaarey.
“Dad la tuhunsan yahay inay la socdeen Shabaabkii madaafiicda soo tuuray ayaa la soo qabtay, wayna xiran yihiin.” Ayuu yiri Gudoomiye Kuxigeenka Garbahaarey oo intaa ku daray “Ciidamadu way bilaabeen hawlgalada, wayna socdaan.”
Cabdi Barre ayaa yiri “Shabaab dad bay adeegsadaan oo xoog ay ku haystaan oo reer miyi ah, oo ay yiraahdaan meelahaa warbixino nooga keena. Marka waa dad uu tuhun galay, waana la baarayaa. Dadkaasi laba nin bay ahaayeen, mid waa la sii daayay, midkii kalaa baaritaan uu ku socdaa.”
Garbahaarey waa goobta labaad ee lagu wado in lagu soo doorto Xildhibaanada Golaha Shacabka ee deegaan doorashadoodu tahay Jubbaland, marka laga soo taggo Magaalada Kismaayo.
Previous articleMaxaan ka naqaanaa Kooxda ADF ee dagaalka kula jirta Uganda
Next articleGalmudug oo 3 maalmood ku iclaamineysa doorashadii ugu horeysay ee Golaha Shacabka